Bari. Ọ na-apụta site na amaghị onwe ma kwuo: "Anwụrụ m ma hụ Chineke. Ana m agwa gị ihe eluigwe dị" | Blọọgụ nke ekpere
Bari. O si n’oma puta ma kwuputa: “Mu onwem nwuru, ahuru m Chineke. Asim gi ihe nke igwe di ka”
Ihe omume a na-emenye ụjọ na Bari. Nwoke dị afọ iri anọ na itolu si n’ọgba ọgwụ nke ndị dọkịta chere ruo mgbe ụnyaahụ lere anya. Mgbe afọ iri gasịrị nwoke ahụ lọghachiri ikwu okwu; ahịrịokwu mbụ o kwuru bụ: “Ahụwo m Chineke”.
Ndị nta akụkọ na-ewute ya, ọ bụ ezie na Prọfesọ Mario Mercone, onye na-agbaso ikpe ya site na mmalite, tụrụ aro ka ọ ghara inye ya nsogbu n'ime awa iri abụọ na anọ mbụ, ọ sịrị karịa: “Enweela m Eluigwe. Enwere nnukwu ahịhịa a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọkụ dị elu mgbe niile. Enweghị ajọ ihu igwe na mwute dị ebe ahụ. Onye ọ bụla na-eme ọ happyụ na ị nwere ike ofufe. Puku puku abụọ enwere ike ịdị ndụ. Nke kachasị, enweghị mkpa dị ugbu a iji gboo, enweghị onye agụụ na-ata ahụhụ, onweghị onye na-ata ahụhụ site na oyi, okpomoku ma ọ bụ mgbu. Ike pụrụ iche dakwasịrị ihe ndị dị n’elu. Onweghi onye n’enwe obi iru uju ma obu obi ilu, ezinaulo ndi mmadu nwere ike karita ma zute ozo. Onweghi ike omume imejọ mmadụ, a na-ahụ okwu dịka ọ continuousụ na-aga n’ihu ”.
Nye onye nta akụkọ ọ jụrụ nwoke ihe Chineke dị, ọ zara, sị: “Chineke, ọ bụ ezigbo nna. M ga-ekwu na aesthetically ọ dị ka ezigbo nwa afọ 50, ọ na-aghọta ma nso onye ọ bụla. Ihe kacha ju m anya bu na onweghi mgbe nile ndi edoziri edozi. Chineke na-agbadata n'etiti mmadụ niile nọ ebe a ma na-egwuri egwu ma sorokwa ha nwee ntụrụndụ. Nso utịbe utịbe edidi ntem ke ama akakpa. ” Mana ugbu a Aldo alọghachila n'etiti ndị dị ndụ, ọ tụleghachila ndị ọ hụrụ n'anya ma nwee obi ụtọ. Knowsnye mara ma oge ụfọdụ ọ chọghị inweta ndụ n'eluigwe.
← Na post gara aga Gara aga post:Nraranye nke Bible iji dozie esemokwu ahụ gbara anyị gburugburu
Ọzọ Post → Post ozo:Poopu kpọrọ onye nọ n'afọ iri na ụma autistic onye "gbaziri" ya na ngosipụta nke udo
8 Ibọrọ na “Bari. Na-apụta site na coma ma kwupụta: "M nwụrụ wee hụ Chineke. Ana m agwa gị ihe eluigwe dị ka" "
MONACHELLA GIUSEPPE o kwuru, sị:
Mee 2, 2020 n’elekere 5: 48 nke ehihie
Ekwenyere m n'ihi na ahụkwara m Chineke na nrọ, agabigawo m na paradise paradise M rọrọ nrọ na enwere m ike ịgwa gị na ihe niile dị, ana m arịọ gị ka ị ghara ịbịaru nso n'ihe ụwa nke ị nwere inweta ọla edo niile dị n'ụwa a. you ga-abanye n’alaeze nke nna, A Hụrụ M Chineke, ahụwo M JESUS ​​A M H THERG GBỌCH, MARA, M H MRON MADONNA, A P CANR EN M YOUBANARA M N’ LIFEKW MYKW THATKW THATKW THATKW EXKW EXKWỌ AKW ....KWỌ NSỌ .... Mgbe nile gbaghara gị….
Assunta o kwuru, sị:
Mee 13, 2020 n’elekere 12: 28 nke ehihie
Lee ka o si maa mma! Afọ gara aga site na ike gwụrụ m hụrụ otu amụma, ana m emesi gị obi ike na ihe ọ gwara m ma ọ bụrụ na ọ ga-emezu ..
Franco o kwuru, sị:
Mee 20, 2020 n’elekere 8: 12 nke ehihie
Lee ka o si maa mma n’echiche iche na mgbe ndu a juputara n’ahụhụ, inwere ike ibi ndụ ọzọ na Chukwu dị obi ebere ma dịkwa mma. Chineke, nne nke Elu-igwe na Ndị-nsọ niile nọ na Paradaịs hụrụ nwoke ahụ nọ n’ụwa n’anya ma jiri nnukwu ịhụnanya na-eche ka anyị nọrọ n’otu ụbọchị. Ka anyị hapụ ịrapara n’ihe nke ụwa, anyị ejiri aka nkịtị bịa, anyị ji aka anyị laghachi na Nna anyị, atụla egwu ọnwụ n’ihi na ọ dịghị adị. Jesus Christ kwụgburu n’elu obe n’ụbọchị nke atọ ebilite na ndụ. Nke a bụ akụkọ ihe mere eme abụghị echiche efu.
carmelo o kwuru, sị:
Mee 21, 2020 n’elekere isii nke ehihie
ọ bụrụhaala na anyị anaghị ahụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụrụgodị na m ahọrọ ha na hel
mario o kwuru, sị:
Mee 21, 2020 n’elekere 1: 10 nke ehihie
CHINEKE BAR EZI NA IME.
rosalia o kwuru, sị:
Mee 23, 2020 n’elekere 2: 57 nke ehihie
ọ chọghị ka ndị na-egbu nwanne ya chụpụrụ ha na nke mbụ mụ ahụla mmụọ ozi mara mma 2 cn nku niile buru ibu dị ka nku egbe na otu ewere ya na obere ka m nwere vidiyo ahụ
carmela Vegliante o kwuru, sị:
Mee 23, 2020 n’elekere 6: 21 nke ehihie
Ọ ga-amasị m ịhụ ha ka Chukwu megheere m ụzọ m ga-ebi ma nyere m aka nyere ụmụ m aka
Francesco o kwuru, sị:
Mee 31, 2020 n’elekere isii nke ehihie
Chukwu, Jesus, Nwanyị anyị, ndị mmụọ ozi na ndị nsọ dị adị ma m kwenyesiri ike na ya ma soro nwunye m hụrụ n'anya na-ekpekọ ekpere. M na-ekele ha niile, n'ihi na atụnyere ndị na-ata ahụhụ n'ezie, mụ na ezinụlọ m na nsogbu niile na-eto Eluigwe maka nsọpụrụ ha nwetara. Mana ugbu a ike gwụrụ anyị, ndụ na-akawanye njọ, anyị agaghị achọ ịnwụ maka ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị ndị hụrụ anyị n'anya nke ukwuu, mana ike gwụrụ anyị ma anyị ahụghị oge ịlaghachikwuru Nna anyị nke bi n’eluigwe. Ndụ a adịghị mfe ibi, anyị emeela ụzọ anyị ka ọ dị mma ma ọ bụ karịa, ugbu a ọ zuru, ma mgbe Chineke chọrọ, anyị ga-alaghachi ebe anyị bịara ibi ndụ ebighi ebi n'udo na ekpere. Ekele diri Eluigwe, Ekele diri Holy Trinity !!!